नेपाल प्रहरीमा खुल्याे नयाँ भर्ना : जवानदेखि निरीक्षकसम्म र कुचिकारदेखि भान्सेसम्म, कसरी दिने दरखास्त ? « News24 : Premium News Channel
नेपाल प्रहरीमा खुल्याे नयाँ भर्ना : जवानदेखि निरीक्षकसम्म र कुचिकारदेखि भान्सेसम्म, कसरी दिने दरखास्त ?
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठूलाे मात्रामा प्रहरी जवान, अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी र खेलाडी समेतका लागि नयाँ भर्ना खुला गरेकाे छ । गाेरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दै प्रहरी प्रधानकार्यालय मानश्रोत विभाग भर्ना छनोट महाशाखाले दरखास्ता आव्हान गरेकाे हाे ।
महाशाखाले प्रहरी निरीक्षक १०८ जना तथा सहायक निरीक्षक ५२४ जनाका लागि दरखास्त माग गरेकाे छ । त्यस्तै, प्रहरी जवानका लागि ६ हजार २ सय ४४ जना तथा खेलाडी ३० जनाको दरखास्त आव्हान गरिएकाे हाे ।
यसैगरी प्रहरीका लागि खाना बनाउने भान्से ३२० जना र कपाल काट्ने हजाम १५ जनाका लागि दरखास्त अाह्वान गरिएकाे छ । अन्यमा सिलाई बुनाईसम्बन्धी १२ जना, कुचिकार १४ जना, मोचि ९ जनाका लागि समेत भर्ना खुलेकाे हाे ।
कसरी दिने दरखास्त ?
प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षकका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट दरखास्त बुझाउन सकिनेछ । यसका साथै सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख कार्यालयबाट समेत साे पदका लागि दरखास्त दिन सकिने जनाइएकाे छ ।
प्रहरी जवानका लागि भने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका साथै सातै प्रदेशका प्रदेश प्रहरी कार्यालय र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालबाट समेत दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
असोज अठार गतेदेखि कार्तिक २९ गते सम्म उल्लिखित स्थानबाट इच्छुक एवं याेग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
थप जानकारीका लागि तलकाे विज्ञापन हेर्नुहाेला-